Dailyhunt (Newshunt)- Cricket, News,Videos 6.1.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 6.1.9 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Application မ်ား သတင္းမ်ား & မဂၢဇင္းမ်ား Dailyhunt (Newshunt)- Cricket, News,Videos
Dailyhunt (Newshunt)- Cricket, News,Videos ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလား 2019 ၏ဘောလုံးဝေဖန်နေဖြင့်ရီးရဲလ်အချိန် Scorecard နှင့်ဘောလုံးကိုခံစားကြည့်ပါ
•ရမှတ်အပေါ်ကို real-time နောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့သင်၏ tray ထဲမှာသတိပေးချက်
• Viral လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု
Dailyhunt, အိန္ဒိယရဲ့ # 1 သတင်းများ app ကို ဟိန္ဒူ, တမီး, မလေးရာလ, ကန်နာဒါ, ဂု, အင်္ဂလိပ်, မာရသီ, ဘင်္ဂလာ, ဂူဂြာရ, Odia ပနျခြာပီ & ဒူအတွက်ဘက်မလိုက်သတင်း, ဗီဒီယိုနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကတ်များပေးပါသည်။
နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးသတင်းအရင်းအမြစ်များမှတိုင်းမဲဆန္ဒနယ် အတွက်ဒေသခံသတင်းထောက်များရန်, ချက်ချင်းနှင့်မစိုက်သင့်ရဲ့ fingertips- မှာသတင်း & ဗီဒီယိုများပျော်မွေ့။
နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းရွေးကောက်ပွဲကို, Kisi ka tota ဖျာ bano!
Dailyhunt (ယခင် Newshunt) 150 ကျော်သန်းအသုံးပြုသူများကိုခစျြ application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
★အိန္ဒိယထိပ်တန်း 10 စားသုံးသူမိုဘိုင်း Apps ကပ - Nielsen စားသုံးသူအဆင့်★
★တိုက်ရိုက် Mint, - ★ App ကိုရှိရမည်
အိန္ဒိယ App ကိုရေးသားသူကနေ★ကမ္ဘာ့ဖလားအတန်းအစား App ကို - Next ကိုကြီးကဘာလဲ★
အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းထုတ်ဝေရေးကုန်ပစ္စည်းများအတွက်★ Winner GSMA မိုဘိုင်းဆုကို★
Dailyhunt ဒေသခံတတ်! သင်အကြိုက်ဆုံးရင်းမြစ်များမှစွဲငြိဖွယ်ရာဗီဒီယိုကိုခံစားကြည့်ပါနှင့်အိန္ဒိယကိုဖြတ်ပြီး 300+ နေရာများတွင်။ ရွေးကောက်ပွဲကို 2019 တွင်ဗီဒီယိုနောက်ဆုံးသတင်းများ, သတင်း, ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်, နိုင်ငံရေး, အားကစား, စီးပွားရေး, & ဖျော်ဖြေရေးဗီဒီယိုများ Watch ။
, Scorecard Real-time ပုရစ်ရမှတ် update ကိုများနှင့်သီးသန့်သတင်းလွှမ်းခြုံ, ပွဲစဉ်ဇယားကိုရယူလိုက်ပါ, စားပွဲတင် & ပွဲစဉ်မီးမောင်းထိုးပြထားသည်ထောက်ပြသည်။
ပြည်နယ် & စီးတီးသတင်း -
• Bihar သတင်း (बिहारन्यूज़)
• UP သတင်း
ဝေမျှမယ် Daily သတင်းစာမေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏ & လူကြိုက်ရေစီးကြောင်းလက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု -
သင်သည်သင်၏ချစ်ရသူနှုတ်ဆက်ဖို့ခဏထားဖို့လိုပါလျှင်, DailyShare ထုတ်စစ်ဆေး: Daily သတင်းစာမေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏, Funny pics နှင့်လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှုရဲ့အကောင်းဆုံး
ကိုဖတ်ဒေသတွင်းသတင်းစာများ (अख़बार) & ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့် (वीडियो)
• ဟိန်ဒီသတင်း (हिंदीसमाचार) - တိုက်ရိုက် Hindustan, Aaj တာ့ခ်, Amar Ujala, Prabhat Khabar, ပန်ဂျပ် Kesari & ပိုပြီးများကဲ့သို့ဦးဆောင်သတင်းစာများအနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဟိန်ဒီသတင်း (आजकीताजाखबर) Read
• တမီးသတင်း (தமிழ்செய்தி) - နေ Dinamalar, Dinakaran, Dinamani, Vikatan & ပိုပြီးတူသောသတင်းစာများအနေဖြင့်တမီးသတင်းနှင့်အတူ updated
• မလေးရာလသတင်း (മലയാളംവാർത്തകൾ) - Mathrubhumi, Mangalam, Asianet, Madhyamam & ပိုပြီးထံမှနောက်ဆုံးပေါ်လေးရာလမျသတင်း Get
• ကန်နာဒါသတင်း (ಕನ್ನಡನ್ಯೂಸ್) - ကန်နာဒါ Dunia, ကန်နာဒါ Prabha, Udayavani, Prajavani & ပိုပြီးထံမှကန်နာဒါအတွက်သတင်း Read
• ဂုသတင်း (తెలుగున్యూస్) - Sakshi, Eenadu, တစ်ဦးက P ကိုသံတော်ဆင့်, Prajasakti, ဇီးသတင်းများဂု & ပိုပြီးတူသောလူကြိုက်များသောဂုသတင်းစာများ
• အင်္ဂလိပ်သတင်း - Hindustan Times သတင်းစာများကဲ့သို့ဦးဆောင်သတင်းစာများအနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်အင်္ဂလိပ်သတင်းကိုဖတ်ပါ, အိန္ဒိယ Express, The New အိန္ဒိယ Express ကို, အိန္ဒိယယနေ့တွင် & ပိုပြီး
• မာရသီသတင်း (मराठीबातम्या) - Lokmat, Loksatta, Saamana, Pudhari, Majha စက္ကူ, Dainik Prabhat & ပိုပြီး
• ဘင်္ဂလာသတင်း (বাংলাসংবাদ) - Anandabazar Patrika, Ebela ဘီဘီစီဘင်္ဂလာ, ကာလကတ္တား 24 *7& ပိုပြီး
• ဂူဂြာရသတင်း (સમાચાર) - ဂူ Samachar, Sandesh, GSTV, Vishwa ဂူ & ပိုပြီး
• Odia သတင်း (ଓଡ଼ିଆ) - Odisha Samachar, Odisha သတင်းထောက်, Sambad
• ပနျခြာပီသတင်း - Ajit Jalandhar, Jagbani ပနျခြာပီ Jagran, Rozana ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ & ပိုပြီး
DAILYHUNT (NEWSHUNT) သတင်း အင်္ဂါရပ်များ
•စုစည်းသတင်းတစ်ခုအကြံပြုစီးမှတဆင့်ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်, ဗီဒီယို & ဓာတ်ပုံများ (फ़ोटो)
•အကြောင်းအရာများအားဖြင့် Browse ကို - သင့်အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာများရန်လွယ်ကူ access ကိုအတူကိုယ်ပိုင် Home Screen ကို။ သင့်ရဲ့သတင်းအိမ်သို့အကြောင်းအရာများ Add
•အိန္ဒိယခရိုင် & မြို့များ, ကမ္ဘာ့သတင်း, ဖျော်ဖြေရေးသတင်း (ရုပ်ရှင်ရုံ), horoscope, ရာသီဥတု (मौसम), အလုပ်အကိုင်အသတင်းများ, ကာကွယ်ရေး, ဘောလုံးပြိုင်ပွဲလွှဲပြောင်း, စတော့ရှယ်ယာမွမ်းမံမှုများမှသင်၏ဘာသာစကားဖြင့်ဒေသခံသတင်း Get
• Whatsapp, Facebook သို့မဟုတ်သင်ထည့်သွင်းထားသောအခြားမည်သည့် app ကိုကျော်ဝေမျှမယ်သတင်း
လူကြိုက်များသောရှာဖွေမှုများကို - သတင်းအမဲလိုက်ခြင်း, သတင်းအမဲလိုက်ခြင်း Hindi, Tamil သတင်းအမဲလိုက်ခြင်း, newshunt
မည်သည့်ကိစ္စများတိုင်ကြားရန်သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက် share & ကျနော်တို့ YourFriends@dailyhunt.in မှ Newshunt- ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ
Dailyhunt (Newshunt)- Cricket, News,Videos အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Dailyhunt (Newshunt)- Cricket, News,Videos အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Dailyhunt (Newshunt)- Cricket, News,Videos အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Dailyhunt (Newshunt)- Cricket, News,Videos အား အခ်က္ျပပါ
catappult စတိုး 30.71k 26.07M
Dailyhunt (Newshunt)- Cricket, News,Videos ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Dailyhunt (Newshunt)- Cricket, News,Videos အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 6.1.9
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.dailyhunt.in/privacy-policy/
App Name: Dailyhunt (Newshunt)- Cricket, News,Videos
Release date: 2019-08-18 09:26:42
လက်မှတ် SHA1: BC:A0:4A:25:DA:1A:78:E5:46:83:15:99:5C:9A:0C:5F:AD:E8:CE:1A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Chandrashekhar Sohoni
အဖွဲ့အစည်း (O): Eterno Infotech Pvt Ltd
Dailyhunt (Newshunt)- Cricket, News,Videos APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ